Tonizia: Ny Fomba Nangalaran’ny Mpiandraikitra ny Fifidianana Ny Zoko Hifidy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2014 3:45 GMT
Tunis, Tonizia. 26 Oktobra 2014 — vehivavy mpifidy iray mandatsaka ny vatony any amin'ny biraom-pifidianana iray ao Tonisy nandritra ny fifidianana parlemantera Toniziana. Nikatona tamin'ny 6 ora hariva ireo biraom-pifidianana, taorian'ny nahavitan'ireo mpifidy ny safidiny tamin'ny fifidianana parlemantera Toniziana, mba hifidy ireo mpikambana miisa 217 ao amin'ny Antenimiera Mpisolotena ny Vahoaka.
Sary an'i Chedly Ben Ibrahim. Fizakàmanana: Demotix
Nanomboka ny zavatra rehetra rehefa nanoratra anarana hanao ny fifidianana ampitain-davitra aho tanatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Toniziana 2014, tany amin'ny tanànan'i New York. Mipetraka ao Denver aho, noho izany, noheveriko fa ao no toerana tsara indrindra hifidianana, satria matetika dia afaka mahita tapakila-nà fiaramanidina mora ho any amin'ny “Big Apple” (Paoma Be) aho. Matetika, saingy tsy isanandro: indrisy, tsy tonga tany New York mihitsy aho ny volana Oktobra mba handatsaka ny vatoko. Nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Novambra kosa anefa, tany La Haye aho, ary satria nomen'ny Kaomisiôna Avo Tsy Miankina misahana ny Fifidianana an'i Tonizia (ISIE) fahafahana hanova ny toeram-pifidianany ireo olom-pirenena Toniziana rehetra mipetraka any ivelany, nanapa-kevitra ny hanova ny toerako ho any aho.
Tsotra ihany ny dingana arahina: alefanao ny dika mitovin'ny pasipaoronao, porofon'ny fisoratanao anarana tamin'ny voalohany, ary mameno taratasy ianao. Alefaso any amin'ireo solontenam-paritrao ireo antontan-taratasy ireo, ary izy ireo no handefa izany any Tonizia hodinihan'ny ISIE. Nandefa ireo antontan-taratasiko tany amin'ny biraom-paritra aho, ary namaly tamim-pahalalam-pomba izy ireo nanamarina fa napetrako tsara ireo taratasy rehetra nilaina ary feno tsara ny antontan-taratasiko. Handefa io any amin'ny tompon'andraikitra mahefa any Tunis izy ireo, ary miandry izay havaliny.
Mety manontany tena angamba ianareo hoe ahoana no nahafahako nisafidy mora foana ny hanova ny toeram-pifidianako avy tamin'ny tanàna iray ao amin'ny firenena iray ho any amin'ny tanàna iray alavitra, any amin'ny tanibe hafa any. Araka ny fitsipiky ny ISIE, samy ao anatin'ny distrika fifidianana iray ihany i New York sy i La Haye. Toy izao ireo distrika ho an'ireo Toniziana mipetraka any ivelany: Frantsa 1; Frantsa 2; Alemàna; Italia; Ireo firenena Arabo; Amerika ary ny ambin'i Eorôpa. Ary araka ny tokony ho izy, tokony afaka mifidy any amin'ny toeram-pifidianana rehetra ao anatin'ny distrika iray ianao, tsy marina ve?
Tsy izany anefa, araka ny ISIE. Ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ny taona 2014, novain'ny ISIE ireo fitsipika ary nataony niverina nisoratra anarana daholo ny rehetra mba hifidy; ary raha mamerina misoratra anarana hifidy any New York ianao (na Houston, na Vienna, na any amin'ny tanàna hafa), tsaratsara kokoa aminao ny mieritreritra hoe io tanàna io mihitsy no toerana hanaovanao ny safidinao.
Ny 13 Novambra, namoaka ny anaran'ireo “voafantina” hifidy ny ISIE. Tsy tao anatin'ny lisitra ny anarako—ary toy izany ihany koa ny an'ireo maro hafa, ireo maro hafa tao anatin'ny distrika misy ahy izay nangataka fanovàna. Tao amin'ny biraon'i Montreal, olona miisa telo ihany no nekena. Telo. Ary tsy nomena ny antony izahay, na fanamarinana ny amin'ny tsy nipotran'ny anaranay tao.
Fanamaivanan-javatra ny fitenenana hoe tezitra mafy aho. Olom-pirenena Toniziana feno aho, izay tsy mbola nifidy na dia in-dray mandeha monja aza, noho ny tsy fahaizan'ny tompon'andraikitry ny fifidianana Toniziana. Nientanentana erý aho fa hifidy voalohany ihany ny farany, hampihatra ny zo fototra indrindra ananako. Anefa nanapa-kevitra ny ISIE fa afaka misafidy an-jambany izay afaka hifidy sy izay tsy afaka izy. Nanapa-kevitra izy fa manana fahefàna handroba ireo zon'ny olom-pirenena.
Tsy dia nanana zavatra nambara loatra ireo solontenam-paritra, fa nampahatsiahy fotsiny an'ireo nolavina hoe “miankina amin'ny ISIE” ny fisafidianana ny hoe iza amin'ireo fangatahana no azo ekena. Mivaky toy izao ny hafatra navoaka tao amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo: “Tsy manome antoka ny faneken'ny ISIE ny fahafenoan'ny antontan-taratasinareo. Mila ho isanandro izahay no namoaka tamin'ny pejinay fa ny ISIE irery ihany no manana fahefana hanaiky ny fanovàna. Azonay tsara ny hasosoranareo, saingy tsy manana valiny hafa ankoatra ny anananareo izahay.”
Mila manontany tena ihany koa aho raha misy ifandraisany amin'ny pôlitika izao. Na dia tsy azoko fantarina marina aza raha noho ny fomba fijeriko ny pôlitika no nandavana ny fangatahako, dia izao no fantatro: nataon'ny ISIE tena sarotra be ho an'ireo Toniziana mipetraka any ivelany ny manatanteraka ny zon'izy ireo hifidy, ary tranga maro no notaterina nandritra ireo fifidianana solombavambahoaka tamin'ny Oktobra, izay olona maro no tsy afaka nahita ny anarany tao amin'ireo birao izay nisoratany anarana, ka noho izany dia tsy afaka nifidy. Nisy ihany koa ireo tatitranà mpikambana ao amin'ny birao nandresy lahatra ireo namana (matetika dia mizara firehana pôlitika sahala) mba handeha hifidy ary hameno ny trano miafina.
Noho izany, satria tena farak'izay nanjakan'ny fikorontanana tanteraka tao amin'ireo birao any ivelany nandritra ny fifidianana solombavambahoaka, efa hitako eto sahady fa mbola ho ratsy kokoa ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena rahampitso. Ny tena mampalahelo amin'izany dia tsy nahatsapa izany hatezerana tamin'ny fireneko izany aho hatry ny fotoanan'i Ben Ali. Tamin'izany fotoana izany dia nahatsapa aho fa nandà ahy foana ny Toniziana, mahatonga ahy hahatsapa tena ho toy ny olom-pirenena any amin'ny sokajy faharoa, isaky ny manandrana manokatra ny vavako aho, momba an'itsy na iroa, na rehefa manatanteraka ny zo fototra ananako sy ireo adidy.
Ankehitriny, mahatsapa izany indrindra aho. Mahatsapa aho fa tsy rariny ny fitondrana ahy, mahatsapa tena ho voaroba aho, ary miantso ireo manam-pahefana mpahay lalàna any Tonizia mba hanokatra fanadihadiana sy hitondra valiny amin'izao fanontaniana manaraka izao: nahoana ilay fangatahana fanovàn-toerana no nolavina? Inona no fototra namerana ireo Toniziana amin'ny zony hifidy?
Toniziana-Amerikana mpianatra lalàna i Wafa Ben Hassine, mifantoka indrindra amin'ny Lalàna Iraisam-pirenena sy ny Lalànan'ny Aterineto. Mpiaro ny zon'olombelona maneran-tany izy ary miompana kokoa amin'ny tontolo Arabo.